विचार Archives - Himali Patrika
७ असोज २०७८, 7:12 pm
७ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका कारण अरु सांसदले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नपाएको बताएका छन् । एमालेले चालु अधिवेशन शुरु भएकै दिन २३ साउन…
८ भाद्र २०७८, 1:55 pm
संजिव कार्की राम कुमारी झाँक्री पून चर्चामा छिन् । भनौ भाइरल छिन् । भाइरल बनिरहनु यिनको राजनीति र सक्रियताले निर्धारण गरेको पोजिसन हो ।सामाजिक संजालमा र नेपाली राजनीतिमा । नयाँ पार्टी नेकपा समाजवादी गठन गर्न…
७ असार २०७८, 9:14 pm
आरक्षण ब्राह्मणहरुले पनि पाएकै हुन। पढ्ने आरक्षण। यो देशमा सबैले पढ्ने आरक्षण कहाँ पाए र? ब्राह्मणहरुले वेद पढे। पुराण पढे। कर्मकाण्ड पढे र कर्मकाण्ड गरे। दलितहरुले वेद पढ्न खोज्दा जिब्रो काटियो। सैयौँ वर्षको यही आरक्षणमा…
२ असार २०७८, 5:13 pm
पाण्डव शर्मा ‘जब पर्यो राति, तब बूढी ताती’ भन्ने नेपाली उखान हाम्रो नेपाली समाजमा निकै चर्चित छ । हाम्रो पुर्खाहरूले दूरगामी सोचेका साथ यस्ता उखान टुक्काहरूको निर्माण गरेका हुन् । उनीहरूका धेरै तर्कहरू निकै सत्य…
३ जेष्ठ २०७८, 2:43 pm
यकिन सम्झना छैन । २०३५ को असार अन्तिमतिर वा साउन लागि नै सकेको हुनुपर्छ । मध्य वर्षातमा हराभरा वनेका खेतवारी र वन बुट्यानले गर्मी यामको खपिनसक्नु उष्णतालाई रोक्न सकिरहेका थिएनन् । म भने कहिल्यै नगएका-नपुगेका…
२३ बैशाख २०७८, 5:25 pm
अनिल न्यौपाने मान्छेहरू किन यति साह्रै यताउता गरिरहेका छन् आज! केटाकेटीहरु त ठिकै हो, यी ठुल्दाइलाई के भएछ ? म घरमाथि रहेको सानो बारीमा काम गरिरहेकी छु। आज मेरो श्रीमान आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ सहरमा काम…
२३ बैशाख २०७८, 9:35 am
उमेरले करिब ६ दशक लामो समय नाघिसकेका दाङ क्षेत्र नम्बर २ (ख) का लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अमर डाँगीले बुधबार आफ्नोे पदबाट राजिनामा दिए । करिब ४ दशक लामो राजनैतिक जीवन बिताएका माननीयले लिएको यो…
पिठ्युँमा बच्चा बोकेर ड्युटी गर्ने ट्राफिक जोडीको प्रेम कहानी– सडकमा…
२८ चैत्र २०७७, 8:41 am
खोटाङ घर भएकी प्रहरी जवान बोना ढकाल जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इलाम मातहत रहेर काम गर्ने गरी इटहरीबाट इलाम सरुवा भएकी थिइन् ।२०६३ चैत २० मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकी ढकालको इलाम बजारमा ड्युटी थियो…
ओली-मोदी मित्रता : सम्बन्धमा नयाँ उचाइ
१७ चैत्र २०७७, 6:11 pm
ऋषि धमला यतिबेला नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच सुमधुर सम्बन्ध छ । दुवै नेताहरू आआफ्नो देशमा निकै शक्तिशाली छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि दुवै…
१० माघ २०७७, 6:48 pm
केएम निष्ठुरी आजको साँझ किन किन मलाइ निकै उदास लागेको छ । दुर पहाडमा सुर्यका रस्मीले मलिन मुस्कान छोड्दै गएका छन् । बिहान कोमल बालक भएर धर्तिको स्पर्स गरेका सुर्यका रस्मिहरु मैले यादै नगर्दै बुढेसकालमा…